Home Wararka Anashax xumida iyo hoggaanka guracan ee RW. Kheyre
Anashax xumida iyo hoggaanka guracan ee RW. Kheyre
Qibradeyda aqooneed waxaa ay ibartay in HAK uu yahay shaqsi laba-wajiile ah. Mid waa midka qudbado aad u qurux badan umada Somaliyeed ula hortago sida dib u heshiisiin, ladagaalanka qabyaalada, reereysiga iyo musuq maasuqa. Sida dhabta ah waa shaqsi xushmad daran oo kibir badan, qabyaalad iyo musuq-maasuqna kusifoobay.
W/Q: Khadra Ahmed Duale. Wasiirkii Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha Somalia.